🥇 ▷ Qalad ku dhaca macruufka 7 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka booddo shaashadda qufulka 5 ilbiriqsi gudahood ✅
Qalad ku dhaca macruufka 7 wuxuu kuu ogolaanayaa inaad ka booddo shaashadda qufulka 5 ilbiriqsi gudahood
Waxay ogaadaan qaniinyo kale oo saameyn ku leh shaashadda qufulka macruufka 7
Intii aan wali sugaynay suurtagalnimada iyo wararka xanta ah ee imaatinka soo socda macruufka 7.1.2, hab cusub ayaa la ogaadey inuu kaga gudbo shaashadda iPhone-ka ee macruufka 7, wax ka yar 5 sekan.
Maaha cayayaanka ugu horreeya ee ku dhaca iPhone iyo iPad ee leh iOS 7
Maaha markii ugu horraysay ee hab la helo uu noo oggolaado in aannu ka boodno shaashadda iPhone-ka, xitaa haddii aannu haysanno koodh quful ah oo aannu kaga hor tagno dhibaatadan. Waxa ugu walaac badan ee arintaan waa xawaaraha qof walbaa ku fulin karo, wax ka yar 5 sekan.
Waa in la ogaadaa in habraacani uu noo oggolaan doono gelitaanka, keli keli keli keli ah, illaa codsigii ugu dambeeyay ee aan furnay ka hor inta aannan hor istaagin aaladda (iPhone, iPad), sidaa darteed heerka uu gaarsiisan yahay ka go’naanta gaarka ah iyo qatarta amni ee iDevice noo ku xirna arjiga ugu dambeya ee aan helnay ka hor intaan aaladda qufulin.
Mid ka mid ah waxyaabaha ay tahay in xisaabta lagu daro ayaa ah shuruudaha, maadaama la awoodo in lagu shaqeysto cayayaankaan waxaa lama huraan ah in xarunta ogeysiinta ay ka maqantahay xarunta ogeysiiska iyo in marin looga helo Xarunta Kontaroolada laga soo qaado shaashadda qufulka ay shaqeyneyso.
Demo fiidiyaha cayayaanka ka boodboonaya shaashadda qufulka ee macruufka 7
Markaa waxaad arki kartaa fiidiyaha ay na tusayaan sida ay suurta gal u tahay, dhowr tillaabo, ka bood shaashadda qufulka qalabka.
Sida ku xusan wixii aan ku aragnay fiidiyowga, si aan u gaarno tan, asal ahaan, waa inaan furno codsi oo aan aaladda iska xiro, ka dib waxaan ka furi karnaa xarunta kantaroolka shaashadda qufulka, aaladda waxaan gelineynaa qaabka diyaaradda, furo Xarunta Ogeysiiska oo guji wicitaanka la seegay. Sidan ayaan ku heli karnaa codsigii ugu dambeeyay ee aan furnay ka hor inta aanan xirin iPhone.
Xalka cayayaankaani waa casriyeyn Apple
Sidii aan horeyba u soo sheegnay, heerka ballanqaad ee cayayaankaani wuxuu had iyo jeer ku xirnaan doonaa dalabka ugu dambeeya ee aan furannay, sidaa daraadeed kuma xadgudbeyso aaladda oo dhan, ilaa barnaamijkaas uu kashifo xogta iyo macluumaadka shaqsiyeed, haddii aad wax walaac ah ka qabtid cayayaanka, waxaa lagugula talinayaa inaad gashid galalka kontaroolka laga soo galo shaashadda qufulka. Tan darteed waa inaad u tagto:
Dejinta> Xarunta Xakamaynta> Helitaanka shaashad xiran
Si aad u hesho nooc ka mid ah xalka, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in Apple ay soo saarto nooc cusub oo ah iOS 7 kaas oo sixi kara tan iyo qaladaadka amniga ee aad hadda la il daran tahay.